August 8, 2019 - ThutaSone
အိုဘားမားက သမီးတွေကိုသင်ပေးတဲ့ ချက်ခြင်း ရပ်တန့်လိုက်ရမယ့်အချက်များ
August 8, 2019 ThutaSone 0
အိုဘားမားက သမီးတွေကိုသင်ပေးတဲ့ ချက်ခြင်း ရပ်တန့်လိုက်ရမယ့်အချက်များ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်မယုံကြည်မူတွေကိုရပ်တန့်လိုက်ပါ တကယ်လို့ မင်းဟာကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်တောင်မယုံကြည်ရင် ဘယ်သူကမှမင်းကိုယုံကြည်နိုင်ကြတော့မှာမဟုတ်တော့ဘူး….အောင်မြင်ခြင်းရဲ့ အစက မင်းဦးနှောက်အတွေးထဲကနေဆင်းသက်လာတာပါ ….. တကယ်လို့မင်းကိုမင်းအမြဲတန်း အပျက်သဘောဖက်ကနေ မြင်နေရင် ဒါမှမဟုတ် အာနာဂတ် ရဲ့ကျရူံးမူတွေမြင်ယောင်နေမယ်ဆိုရင် မင်းဘဝကြီးဟာမင်းထင်သလိုတွေတွေးသလိုတွေဖြစ်သွားတတ်တယ်…. 🌹အပျက်သဘောဆောင်တဲ့ Negativeဆောင်တဲ့ မင်းရဲ့အကျင့်ဆိုးကြီးရပ်တန့်လိုက်ပါ…..မင်းကိုမင်းအထင်မသေးပါနဲ့ ….ပတ်ဝန်းကျင်လူတွေကိုလည်းအထင်မသေးပါနဲ့ ….. မင်းကိုမင်းအထင်သေးမယုံကြည်မဲ့အစား ခုကြုံတွေ့ရတဲ့ပြသာနာတစ်ခုချင်းဆီကို […]
ကျွန်တော်တို့ စားနေတဲ့ သာကူစေ့ကို ဘယ်ကနေရတာလဲ ကျွန်တော်တို့ ထန်းလျက် သာကူ/သကြား သာကူ နှင့် သာကူစေ့ပါဝင်သော အစားအစာတွေ အများအားဖြင့် စားသုံးဖူးကြပါတယ်။သာကူစေ့ကို saksak, rabia ,sago and sagu ဆိုပြီး ရေးသားခေါ်ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့…သာကူစေ့ကို ဘယ်လိုပြုလုပ်သလဲ..သာကူစေ့အတွက် ကုန်ကြမ်းပစ္စည်း(raw materials)ကို ဘယ်ကရသလဲ […]
ရှားရှားပါးပါးတစ်ခုတည်းရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံက ရေခဲ့ပြင်ရွာလေး နှင်း နဲ့ ရေခဲတွေကို တွေ့မြင်ဖို့ ပြည်တွင်း ခရီးသွား သူများစွာကတော့ ပြည်ပနိုင်ငံတွေကို အများဆုံးသွားရောက်လေ့ရှိပါတယ်။ နိုင်ငံတကာမှာ တွေ့မြင်နေရတဲ့ နှင်းတွေနဲ့ ရေခဲတွေကို ပြည်တွင်းတစ်ခုတည်းတွေ့မြင်နိုင်တဲ့ နေရာလေးတစ်ခုကချင်ပြည်နယ်မှာရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်။ သာမာရွာတွေနဲ့မတူပဲ အေးချမ်းလွန်းပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ပုံစံလေးတွေကို ပရိသတ်တွေလည်းတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ ရွာလေးကတော့ ကချင်ပြည်နယ် […]
အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ကားမောင်းရင် သတိထားကြပါ
အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ကားမောင်းရင် သတိထားကြပါ လူ့အသက်တစ်ချောင်း ဟာ ရဖို့မလွယ်ကူသလို ဘယ်ချိန်သေဆုံးမယ်ဆိုတာလဲမသိပါဘူး။ အသက်ကိုဉာဏ်စောင့်တယ် ဆိုတဲ့အတိုင်း ဘာလုပ်လုပ်သတိ လေးနဲ့လုပ်စေချင်ပါတယ်။ ဒီအဖြစ်လေးကြည့်ပြီး ကားမောင်းတဲ့ သူတွေလဲသတိထားကြပါ။ ကုန်ကားတွေ နောက်က ကပ်လိုက်တဲ့ကားငယ်တွေရဲ့ အန္တရယ်ပါ-။ ကုန်တင်ကားပေါ်က လျောကျလာတဲ့သံချောင်းတွေ အရှိန်နဲ့ နောက်ကကပ်လိုက်လာတဲ့ ကားငယ်ရဲ့ လေကာမှန်ကိုထိုးဖေါက် […]
မဆီမဆိုင််ပညာရေးဝန်ထမ််းတွေကိုု တောင််ပြုံးပွဲမှာ မသွားမနေရ တာဝန််ချထားမှုအပေါ်သူတို့့ အမြင်
မဆီမဆိုင််ပညာရေးဝန်ထမ််းတွေကိုု တောင််ပြုံးပွဲမှာ မသွားမနေရ တာဝန််ချထားမှုအပေါ်သူတို့့ အမြင် နည်းနည်းတော့အားယားလိို့ ဟောင်ပါရစေ ပညာရေးဝန်ကြီး ကိုမျိုးသိန်းရေ တောင်ပြုံးပွဲတော််ကို သွားပြီး ပညာရေးဝန်ထမ်းတွေသွားပြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ရမှာဆိုတော့ ဒီညွန်ကြားချက်က ဝန်ြ်ကီးဌာနကတဆင့် သက််််ဆိုင်ရာပညာရေးမှုးကိုထုတ်တာဆိုတော့ ခင်ဗျားတို့ဟာက မယောင်ရာဆီးလူးသလိုဖြစ်နေပြီဗျ ။ ငါ့မြင်းငါစိုင််း စစ်ကိုင်းရောရောက်ဆိုတဲ့အတွေးမျ်ို းလား ငါတို့ညွန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်ရင် လိုက်နာရမယ် သေဆိုသေ ရှင်ဆိုရှင်ဆိုရင်တောင် […]
အဖေတူသားလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သားဖြစ်သူ ကိုပုံသွင်းတော့မယ့် အောင်လအန်ဆန်း
အဖေတူသားလေးတစ်ယောက်အဖြစ် သားဖြစ်သူ ကိုပုံသွင်းတော့မယ့် အောင်လအန်ဆန်း ပရိသတ်ကြီးရေ ၊ မြန်မာ့စပါးအုံး အောင်လအန်ဆန်း တစ်ယောက် အခုအချိန်ထိကြိုးဝိုင်းထဲမှာ ရွှေရောင်နေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲပါ။ မြန်မာ့ဂုဏ်ကို နိုင်ငံတကာမှာဆောင်နို်င်တဲ့အတွက်လည်း ပရိသတ်တွေက အောင်လမှ အောင်လ လို့ စွဲစွဲလမ်းလမ်း အားပေးနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ အောင်လ တစ်ယောက် သားဖြစ်သူကို ကိုယ်ခံပညာအမွေတွေပေးနေပြီလို့လည်း သိရပါတယ်။ […]
​ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးသော သတင်းတစ်ခု… မြောင်း မြ ပဇ္ဇောတာရုံစာသင်တိုက်ကြီးဟာ တချိန်က ဧရာဝတီတိုင်းမှာ စာသင်သား အများဆုံးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ စာသင်တိုက်ကြီးပါ။ ဒါပေမဲ့ အခု စာသင်သား မရှိတော့ဘူး တဲ့… ပဲခူး ကြခတ်ဝိုင်း စာသင်တိုက်ကြီးဟာ တချိန်က စာသင်သား ထောင်ကျော်ရှိတဲ့…. စာသင်တိုက်ကြီးပါ အခု သုံးလေးရာပဲ ရှိတော့ […]
နေတိုးရဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားအတွက် ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးပရိသတ်တွေကို အံ့အားသင့်
နေတိုးရဲ့ ဇာတ်ကားတစ်ကားအတွက် ရရှိတဲ့ အနုပညာကြေးပရိသတ်တွေကို အံ့အားသင့် နေတိုးကတော့ အကယ်ဒမီဆုတွေအပြင် နောက်ထပ် ထူးချွန်ဆုတွေ အများကြီးပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာကြေးက ပရိသတ်အားပေးမှုနဲ့ ဆိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ပရိသတ်အချစ်တော် မင်းသားချောတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ နေတိုးက အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ရဲ့ အနုပညာကြေးဟာ အားပေးတဲ့ ပရိသတ်အပေါ် မူတည်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ […]
ဖြစ်ရပ်မှန် ဇာတ်လမ်းတပုဒ်အဘအောင်မင်းခေါင်၏ မစမှု ခံရသူတစ်ယောက် မခင်လှက အညာသူ ရိုးရိုးအအကြီးစာကလည်းသေစာရှင်စာဖတ်တတ်ရုံ ဘုရားတရားတော့ ကြည်ညိုသလားမမေးနဲ့ စျေးရောင်းပြန်လာတာနဲ့ ယောဂီဝတ်လဲပီး ဘုရားစင်ရှေ့မှာရတတ်သမျှ ဘုရားစာကို ကပေါက်တိ ကပေါက်ချာအကုန်ရွတ် … ။ မခင်လှယောကျာ်းကကုန်ထမ်းသမားစကားနည်းရန်စဲမိန်းမဘာလုပ်လုပ်…တစ်ခွန်းမှ မဟတဲ့သူ ။ တစ်နေ့ သူ့အနားက ပလာစတာရုပ်သည်ဆီမှာ ထူးထူးဆန်းဆန်းအရုပ် တစ်ရုပ်တွေ့လို့မေးကြည့်တော့ […]
အကြိုဗိုလ်လုပွဲကို ထိုက်တန်စွာ တက်လှမ်းနိုင်ခဲ့တဲ့ မြန်မာ့တပ်မတော် သံချပ်ကာ တပ်ဖွဲ့ International Army Games 2019မှာ မြန်မာ ပရိသတ် စိတ်ဝင်စားမှု အရှိဆုံးက တင့်ကား အမြန်မောင်းနှင်ပစ်ခတ်မှှု (Tank Biathlon )ပြိုင်ပွဲ ဖြစ်ပါတယ်။live ထုတ် လွှင့် ပြသပေးတာကြောင့်လည်း ပိုမို စိတ်ဝင်စားမှုခံခဲ့ရပါတယ်။ […]